Matio 25 - Ny Baiboly
Matio toko 25
Ny virjiny hendry sy ny virjiny adala - Ny fanoharana ny amin'ny talenta - Ny fitsarana farany.
1Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra, dia ho tahaka ny virjiny folo izay naka ny fanalany, ka lasa nitsena ny mpampakatra sy ny ampakarina. 2Ny dimy tamin'izy ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry; 3ny dimy adala nitondra fanala, fa tsy nitondra solika; 4fa ny hendry kosa nitondra fanala sy solika tamin'ny fitoeran-tsolika. 5Ary noho ny fahelan'ny mpampakatra, dia samy rendremana izy rehetra ka natory. 6Fa nony nisasaka ny alina, dia nisy niantso mafy hoe: Inty tamy ny mpampakatra, mandehana mitsena azy hianareo. 7Tamin'izay dia niarina ireo virjiny rehetra ireo ka nanamboatra ny jirony. 8Ary hoy ny adala tamin'ny hendry: Mba omeo kely amin'ny solikareo izahay, fa efa ho faty ny jironay. 9Ndrao tsy ampy ho anay sy anareo, hoy ny navalin'ny hendry azy; fa aleo mankany amin'ny mpivarotra hianareo, ka mividiana ho anareo. 10Ary raha mbola nandeha nividy izy, dia tonga ny mpampakatra, ka izay efa niomana no niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, dia nohidiana ny varavarana. 11Nony afaka kelikely, dia tonga kosa ireto virjiny sasany ka nanao hoe: Tompoko, tompoko, vohay izahay. 12Fa hoy ny navaliny azy: Lazaiko marina aminareo fa tsy fantatro akory hianareo. 13Koa miambena hianareo, fa samy tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.
14Fa Andriamanitra hanao tahaka ny lehilahy anankiray handeha hivahiny, ka niantso ny mpanompony sy nametraka ny fananany taminy. 15Ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa, ary ny anankiray iray, samy araka izay fahaizany avy; dia lasa nandeha izy. 16Ilay nandray talenta dimy dia nandeha nampiasa izany, ka nahazo tombom-barotra dimy koa. 17Toraka izany ilay nandray roa dia nahazo tombom-barotra roa koa; 18fa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray kosa nandeha nihady tany, dia naleviny tao ny volan'ny tompony.
19Nony ela dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo, ka nampamoaka azy ny amin'ny volany. 20Dia nanatona ilay nandray talenta dimy, nitondra talenta dimy hafa koa ka nanao hoe: Talenta dimy, tompoko, no napetrakao tamiko, ary indreto nahazo tombom-barotra talenta dimy koa aho. 21Dia hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sy mahatoky, noho hianao nahatoky tamin'ny kely, dia hataoko mpanapaka ny be hianao: miaraha mifaly amin'ny tomponao. 22Ary nanatona koa ilay nandray talenta roa, dia nanao hoe: Talenta roa, tompoko, no napetrakao tamiko, ary indro nahazo tombom-barotra roa hafa aho. 23Dia hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sy mahatoky, noho hianao nahatoky tamin'ny kely, dia hataoko mpanapaka ny be hianao: miaraha mifaly amin'ny tomponao. 24Dia mba nanatona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe: Tompoko, fantatro fa olona lozabe hianao, fa mijinja amin'izay tsy namafazanao, ary manangona amin'izay tsy nanahafanao, 25ka natahotra aho dia lasa naleviko tany anatin'ny tany ny talentanao: koa indro averiko aminao ny anao. 26Namaly ilay tompony ka nanao taminy hoe: Ry mpanompo ratsy sady kamo, fantatrao fa mijinja amin'izay tsy namafazako aho, ary manangona amin'izay tsy nanahafako; 27koa tokony ho napetrakao tany amin'ny mpampanana ny volako, ary rahefa tonga aho dia ho nandray ny ahy mban-janany. 28Alao ary ny talenta folo; 29fa izay manana no homena, ka hanam-be izy, fa izay tsy manana kosa dia halaina aminy mbamin'izay ananany aza. 30Ary ilay mpanompo tsy vanon-ko inona dia ario any amin'ny maizina any: any no hisy fitomaniana sy fikitroha-nify.
31Ary rahefa ho avy amim-boninahitra ny Zanak'olona otronin'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy; 32ho vory eo anatrehany ny firenena rehetra, ary izy hanavaka azy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy; 33ny ondry moa hataony eo an-kavanany; ary ny osy kosa eo an-kaviany. 34Amin'izay ny Mpanjaka dia hilaza amin'izay eo an-kavanany hoe: Avia hianareo, ry nohasoavin'ny Raiko, handova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nahariana izao tontolo izao. 35Fa noana aho, nomenareo hanina, nangetaheta aho, nomenareo hosotroina; nivahiny aho, nampiantranoinareo; 36tsy nitafy aho, notafianareo; narary aho, novangianareo, tany an-tranomaizina aho, notsidihinareo. 37Ary dia hamaly azy ny marina ka hanao hoe: Tompo, oviana no hitanay noana hianao ka nomenay hanina; nangetaheta ka nomenay hosotroinao? 38Oviana no hitanay nivahiny hianao ka nampiantranoinay, na tsy nitafy ka notafinay? 39Oviana no hitanay narary hianao na tany an-tranomaizina ka novangianay? 40Dia hamaly ny Mpanjaka ka hanao aminy hoe: Lazaiko marina aminareo fa isaky ny nanao izany tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto hianareo, dia nanao izany tamiko.
41Ary dia hiteny amin'ireo eo an-kaviany kosa indray izy ka hanao hoe: Mialà amiko hianareo, ry voaozona, mba ho any amin'ny afo mandrakizay izay voavoatra ho an'ny demony sy ny anjeliny. 42Fa noana aho, tsy nomenareo hanina; nangetaheta aho, tsy nomenareo hosotroina; 43nivahiny aho, tsy nampiantranoinareo; tsy nitafy aho, tsy notafianareo; narary aho sy tany an-tranomaizina, tsy novangianareo. 44Dia hamaly azy koa ireo hanao hoe: Tompo, oviana no hitanay noana hianao, na nangetaheta, na nivahiny, na tsy nitafy, na narary, na tany an-tranomaizina ka tsy namonjy anao izahay? 45Fa hovaliany hoe: Lazaiko marina aminareo fa isaky ny tsy nanao izany tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto hianareo, dia tsy nanao izany tamiko koa. 46Dia ho any amin'ny fijaliana mandrakizay ireo, fa ny marina kosa, ho any amin'ny fiainana mandrakizay. >